ပြောပြောနေကျ BMI ဆိုတာဘာလဲ – JustNow Myanmar News
Body mass index (BMI) ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီ (body fat) ပမာဏကို အနီးစပ်ဆုံးသိရဖို့ သုံးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တွက်ရတာလည်း အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (kg) ကို တည်ပြီး မိမိရဲ့အရပ် (m2) နဲ့ စားလိုက်ရုံပါပဲ။ အခုခေတ်မှာဆို BMI ကို အလွယ်တကူတွက်ပေးတဲ့ mobile application တွေ၊ ပေါင်ချိန်စက်တွေလည်း ပေါပေါများများရှိနေပါပြီ။
BMI ကို ဘယ်သူတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြသလဲဆိုရင်တော့
body builders (ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကျနစွာလှပအောင် ကြိုးစားနေသူများ) အားကစားသမားများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ BMI interpretation
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေ (young and middle-aged adults) အတွက် healthy BMI range ကတော့ 18.5 မှ 24.9 အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ 18.5 အောက်ဆိုရင် underweight ပိန်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပြီး 25-29.9 ဆိုရင်တော့ overweight ဝသည်ဟု သတ်မှတ်ပါတယ်။ Over 30 ဆိုရင်တော့ အဝလွန်နေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
BMI rule ၏ခြွင်းချက်အခြေအနေများ
BMI တွက်နည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီပမာဏနဲ့ ကြွက်သားပမာဏကို တိတိကျကျခွဲထုတ်မပြပေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာတော့ BMI တစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး ပိန်လွန်းတယ်၊ ဝလွန်းတယ်လို့ ကောက်ချက်ချဖို့ ခက်နိုင်ပါတယ်။
၁. ကြွက်သား– ကြွက်သားထုကြီးမားသော အားကစားသမားများမှာ BMI ဟာများနေတတ်သော်လည်း overweight မဟုတ်ပါ။
၂. ကိုယ်လက်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများ– ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုချို့ယွင်းပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်သူများတွင် ကြွက်သားဆုတ်ယုတ်မှုများရှိနိုင်သည့်အတွက် BMI နည်းနေနိုင်သော်လည်း underweight မဟုတ်ပါ။
၃. အရပ်– အရပ်ပုလွန်းသူ (<150cm) နှင့် အရပ်ရှည်လွန်းသူ (>190cm) တို့တွင်လည်း BMI တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ ကောက်ချက်မချနိုင်ပါ။ အရပ်ပုသူတွေမှာ BMI ဟာ 25 ကျော်နေတတ်ပြီး အရပ်ရှည်သူတွေမှာ BMI ဟာ underweight ဘက်ရောက်နေတတ်ပါတယ်။
၄. လူမျိုးစု– ဥပမာ- အာရှတိုက်သားများနဲ့ အိန္ဒိယလူမျိုးများဟာ ဥရောပတိုက်သားများနဲ့ယှဉ်ရင် BMI တူနေရင်တောင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီပမာဏပိုများပါတယ်။ အချို့ အာရှတိုက်သားတွေမှာ BMI ၂၅ မပြည့်သေးပေမဲ့ ကိုယ်တွင်းအဆီပိုများနေတာကြောင့် ဝတဲ့ အနေအထားကို ရောက်နှင့်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
BMI မြင့်ခြင်း နှင့် သင့်ကျန်းမာရေး
အကယ်၍သင်ဟာ overweight ဖြစ်ပြီး (withaBMI >25), ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလည်း နည်းတဲ့သူမျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ ရောဂါအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
နှလုံးရောဂါ သည်းခြေအိတ်ရောဂါ သွေးတိုးရောဂါ Type2ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း အချို့သော ကင်ဆာရောဂါများ (ဥပမာ- အူမကြီးကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ) စိတ်ကျရောဂါ နှင့် အခြားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ
BMI 18.5 အောက်ရောက်နေပြီး underweight ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အာဟာရချို့တဲ့သောအခြေအနေဖြစ်နေနိုင်ပြီး အောက်ပါရောဂါများ ဝင်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားမကောင်းခြင်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ အစာခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ အရိုးပွခြင်း
BMI ကို အသုံးပြုတိုင်းတာ၍ ကျန်းမာလှပသောခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်လျက်…
Body mass index (BMI) ဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အဆီ (body fat) ပမာဏကို အနီးစပျဆုံးသိရဖို့ သုံးတဲ့နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ တှကျရတာလညျး အလှနျလှယျကူပါတယျ။ မိမိရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ (kg) ကို တညျပွီး မိမိရဲ့အရပျ (m2) နဲ့ စားလိုကျရုံပါပဲ။ အခုခတျေမှာဆို BMI ကို အလှယျတကူတှကျပေးတဲ့ mobile application တှေ၊ ပေါငျခြိနျစကျတှလေညျး ပေါပေါမြားမြားရှိနပေါပွီ။
BMI ကို ဘယျသူတှေ တှငျတှငျကယြျကယြျ အသုံးပွုနကွေသလဲဆိုရငျတော့
body builders (ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားကနြစှာလှပအောငျ ကွိုးစားနသေူမြား) အားကစားသမားမြား ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြားပဲဖွဈပါတယျ။ BMI interpretation
အရှယျရောကျပွီးသူတှေ (young and middle-aged adults) အတှကျ healthy BMI range ကတော့ 18.5 မှ 24.9 အတှငျးဖွဈပါတယျ။ 18.5 အောကျဆိုရငျ underweight ပိနျသညျဟု သတျမှတျနိုငျပွီး 25-29.9 ဆိုရငျတော့ overweight ဝသညျဟု သတျမှတျပါတယျ။ Over 30 ဆိုရငျတော့ အဝလှနျနတေဲ့ အခွအေနဖွေဈပါတယျ။
BMI rule ၏ခွှငျးခကြျအခွအေနမြေား
BMI တှကျနညျးဟာ ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အဆီပမာဏနဲ့ ကွှကျသားပမာဏကို တိတိကကြခြှဲထုတျမပွပေးပါဘူး။ ထို့ကွောင့ျ အောကျပါအခွအေနတှေမှောတော့ BMI တဈခုတညျးကို ကွည့ျပွီး ပိနျလှနျးတယျ၊ ဝလှနျးတယျလို့ ကောကျခကြျခဖြို့ ခကျနိုငျပါတယျ။
၁. ကွှကျသား– ကွှကျသားထုကွီးမားသော အားကစားသမားမြားမှာ BMI ဟာမြားနတေတျသောျလညျး overweight မဟုတျပါ။
၂. ကိုယျလကျအငျ်ဂါမသနျစှမျးသူမြား– ကိုယျအငျ်ဂါအစိတျအပိုငျးတဈခုခုခြို့ယှငျးပွီး လမျးမလြှောကျနိုငျသူမြားတှငျ ကွှကျသားဆုတျယုတျမှုမြားရှိနိုငျသည့ျအတှကျ BMI နညျးနနေိုငျသောျလညျး underweight မဟုတျပါ။
၃. အရပျ– အရပျပုလှနျးသူ (<150cm) နှင့ျ အရပျရှညျလှနျးသူ (>190cm) တို့တှငျလညျး BMI တဈခုတညျးကို အသုံးပွု၍ ကောကျခကြျမခနြိုငျပါ။ အရပျပုသူတှမှော BMI ဟာ 25 ကြောျနတေတျပွီး အရပျရှညျသူတှမှော BMI ဟာ underweight ဘကျရောကျနတေတျပါတယျ။
၄. လူမြိုးစု– ဥပမာ- အာရှတိုကျသားမြားနဲ့ အိန်ဒိယလူမြိုးမြားဟာ ဥရောပတိုကျသားမြားနဲ့ယှဉျရငျ BMI တူနရေငျတောငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အဆီပမာဏပိုမြားပါတယျ။ အခြို့ အာရှတိုကျသားတှမှော BMI ၂၅ မပွည့ျသေးပမေဲ့ ကိုယျတှငျးအဆီပိုမြားနတောကွောင့ျ ဝတဲ့ အနအေထားကို ရောကျနှင့ျပွီးသားဖွဈနတေတျပါတယျ။
BMI မွင့ျခွငျး နှင့ျ သင့ျကနြျးမာရေး
အကယျ၍သငျဟာ overweight ဖွဈပွီး (withaBMI >25), ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုလညျး နညျးတဲ့သူမြိုးသာဖွဈတယျဆိုရငျ အောကျပါ ရောဂါအခွအေနတှေေ ဖွဈလာနိုငျခွရှေိပါတယျ။
နှလုံးရောဂါ သညျးခွအေိတျရောဂါ သှေးတိုးရောဂါ Type2ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါ အရိုးအဆဈရောငျခွငျး အခြို့သော ကငျဆာရောဂါမြား (ဥပမာ- အူမကွီးကငျဆာ၊ ရငျသားကငျဆာ) စိတျကရြောဂါ နှင့ျ အခွားသော စိတျပိုငျးဆိုငျရာပွူနာမြား
BMI 18.5 အောကျရောကျနပွေီး underweight ဖွဈနတေဲ့ အခွအေနမှောဆိုရငျတော့ သငျဟာ အာဟာရခြို့တဲ့သောအခွအေနဖွေဈနနေိုငျပွီး အောကျပါရောဂါမြား ဝငျလာနိုငျခြရှေိပါတယျ။
ကိုယျခံအားမကောငျးခွငျး အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာရောဂါမြား အစာခွလေမျးကွောငျးဆိုငျရာရောဂါမြား အရိုးပှခွငျး
BMI ကို အသုံးပွုတိုငျးတာ၍ ကနြျးမာလှပသောခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထိနျးသိမျးနိုငျကွစရေနျ ရညျရှယျလကြျ…